Yaa ku haboon hogaanka maamulka Gobolka Banaadir? (Aqri astaamaha) - Caasimada Online
Home Maqaalo Yaa ku haboon hogaanka maamulka Gobolka Banaadir? (Aqri astaamaha)
Yaa ku haboon hogaanka maamulka Gobolka Banaadir? (Aqri astaamaha)
Nin aan dowladnimo soo arag iyo maamul shaqeynaya ee da’diisu ka yar tahay ama u dhowdahay 40 sano.
Nin aan soo marin maamul ee aqoon qalalan maamul barad ah, dad la dhaqankiisuna liito.
Nin aan dalka ku nooleyn ee dalal nabada ka yimid, ayna adag tahay si loo fahamsiiyo baahida gobolka taalla iyo xaaladda dalka ku nool ku sugan yihiin.
Nin jeneraalnino ku qaatay sanad gudihiis, dowladnimaduna isaga qasan tahay.
Ganacsade ku ilbaxay is xambaar, ee kaliya fahmi kara is faa’iido looga raadiyo dad dhibaateysan.
Nin aan ka mid ahayn xisbi diineedyada fartu ku godan tahay ee kugu hareereysan.
Nin xil hore qaranku ugu dhiibtay ku fashilmay ee qeyli ka daba yeereyso ama feylkiisu madow yahay.
Nin beeshiisu kala weyn tahay qaranimada Soomaaliya iyo heybada caasimada iyo muraayadii dalka
Nin alle yaqaan oo reer Muqdisho ah, meelna uga cararin xiligii dhibaatada ee sida adiga oo kale dadka la joogay lana qeybsaday xanuunka.
Nin da’diidu ka weyn tahay 40 sano, degan, akhlaaq leh, aqoon iyo waaya-aragnimana u leh maamulka.
Nin ka nadiif ah musuqmaasuq oon eex lagu aqoon, dadkana wax u qabtay.
Nin wax ka fahmi kara nidaamyada caasimadaha, xiriirna la yeelan kara caasimadaha caalamka iyo kuwa gobolka.
Nin u dhow dadka caadiga ah iyo bulshada rayidka Gobolka Banaadir.
Nin tashi badan oo talada wax ka siinaya inta ka hooseysa iyo inta ka sareysa.
Nin Muqdisha-da noloshu ku soo noqotay hore u wadi kara oo heerka la tiigsanayo gaarsiin kara.
Nin aaminsan dowladnimo iyo qaranimo oo ka qeyb qaadan kara dibu dhiska dalka
Waxa diyaariyay: Shariif Moalim
HYPERLINK “mailto: Shariif55@hotmail.com